Uchwepheshe we-Semalt Ekudaleni izinhlobo ze-Post Post ku-WordPress - 4 Izinyathelo Ezilula
Izinhlobo zokuthunyelwe ngokwezifiso ziyizinto eziyisisekelo ezibekwe isethi ehlukile yemingcele echazwe kumakhodi. Ngemuva kokukhululwa kwe-WordPress 3.0, kulula kuwe ukudala izinhlobo zakho zokuthunyelwa ngokwezifiso. Uma uwadala ngempumelelo futhi nemingcele efanele, uzoba nendawo ehlelwe kudeshibhodi yakho futhi ungakhula ibhizinisi lakho. Kuyiqiniso ukuthi i-WordPress iyisistimu yokuphatha okuqukethwe okunamandla kakhulu enikeza izinketho eziningi zokubhuloga. Kule minyaka, ikhule ibe yipulatifomu enkulu futhi isenza sikwazi ukwakha amawebhusayithi amabili ayisisekelo kanye nobuchwepheshe. Izici ezintsha zengezwa nsuku zonke, njengamamenyu wangokwezifiso, izinhlobo zokuthumela, amafomethi okuthunyelwe, namawijethi.
Uma ufuna ukwahlukanisa okuqukethwe kwewebhu kuwe ngezigaba ezahlukene ngokusekelwe kwesakhiwo nesakhiwo sesayithi lakho, kumele udale izinhlobo zokuthumela ngokwezifiso. Ngaphakathi kwe-WordPress yakho, ungachaza izigaba, okuthunyelwe, namathegi wabalobi abathile. Ungaphinda wengeze izithombe bese unikeza ukwethembeka kusayithi lakho, futhi konke lokhu kungenxa yohlu lohlobo lwentando.
Lapha u-Oliver King, onguchwepheshe ophezulu Semalt , uxoxile ngezinyathelo ezine ezilula ukwakha izinhlobo zokuthumela ngezindlela ze-WordPress.
Isinyathelo 1 - Bhalisa uhlobo lweposi
Isinyathelo sokuqala ukubhalisa uhlobo lokuthunyelwe. Ngenxa yalokhu, kufanele uvule ifayela lemisebenzi.php bese ufaka umthamo othize kulokho..Kufanele uqiniseke ukuthi ikhodi efakwe kumathegi we-PHP. Kunamakhodi ahlukene angafakwa lapha, kepha amakhodi avamile kakhulu:
umsebenzi we-movie_reviews_init - Lokhu kusisiza ukuthi senze imisebenzi emisha ezinhlotsheni zokuthunyelwe. Le khodi ifakwe ngokuyinhloko efayeleni lemisebenzi.php.
Ilebula - Le khodi echazayo kufanele ifakwe efayeleni le-PHP ngokucophelela. I-Wordpress izosebenzisa kamuva ulwazi olubalulwe kule khodi ukuchaza okuthunyelwe kwakho ngokwezifiso.
bonisa_ui - Kusiza ukudala i-UI ezenzakalelayo futhi kusiza ukuphatha okuthunyelwe okwezifiso ku-panel panel. Ungakwazi futhi ukuyibeka kuyiqiniso noma amanga ngokuya ngezidingo zakho.
Isinyathelo 2 - Hlola konke
Uma usuhlatile uhlobo lwentando yeningi kwifayili ye-functions.php, kufanele uqondise kudeshibhodi ye-WordPress ukuze uhlole ukuthi konke kwenziwa ngendlela efanele. Uma izinto zenziwe kahle, uzobona izinto ezintsha zemenyu ngakwesokunxele kwesikrini okuthiwa njengezibuyekezo ze-Movie. Hamba ngale ndlela, futhi uzobona izinhlobo ezahlukene zokuthumela ngokwezifiso. Chofoza ku-Engeza Okukhethwa Kusha bese usebenza ekuboniseni okuthunyelwe kwakho okwezifiso. Uma uchofoza inketho yokuthunyelwe kokubuka, uzobona ukuthi izikhala zakho ezijwayelekile zivela kanjani ekhasini eliyisiqalo.
Isinyathelo 3 - Dala izifanekiso zohlobo lweposi
Uma ungenelisekile ngethempulethi yamanje yamaposi akho okwezifiso, ungakha ifayela elisha elibizwa ngokuthi i-movie-movie-reviews.php ngaphakathi kwifolda yetimu ukuze uguqule isihloko. Ngaphakathi kwalolu folda, kuzodingeka ufake ikhodi ethile ngaphambi kokulondoloza izilungiselelo. Qinisekisa ukuthi ufake ikhodi kahle futhi ubuyela endaweni yomqondisi ukuze uhlole ukuthi konke kulungile yini noma cha. Ukukhethwa kwethempulethi yakho entsha kuzovela kusigaba seBahla Page.
Isinyathelo 4 - Engeza Izinketho Ezengeziwe
Uma iwebhusayithi yakho iphathelene nokuzijabulisa noma ama-movie, ungangeza izibuyekezo ezimbalwa ze-movie. Kulokhu, kuzodingeka ulungise ubukhulu bezithonjana ze-movie kusuka ku-akhawunti ye-WordPress. Uzobona iqoqo lezibuyekezo ezingalungiswa futhi zihlelwe kabusha ngokusekelwe kohlobo lwakho lokuthunyelwe.